-50% လျှော့စျေး စျေးနှုန်းအစီအစဉ်များမှ
ဆောရီး! ကမ်းလှမ်းမှု ပြီးသွားပါပြီ။
QR Code Reader ကို အသုံးပြု၍ လူမှုရေးအရအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကိုမည်သို့ထိန်းသိမ်းရမည်နည်း
လူမှုရေးအကွာအဝေးကိုတိတိကျကျပြောနေခြင်းနှင့် coronavirus (COVID-19) ဆံ့ရန်ကူညီသည်မှာထင်ရှားပါသည်။ သို့သော်လူမှုရေးအကွာအဝေးကိုထိန်းသိမ်းရန်အထောက်အကူပြုသောကိရိယာများတွင်သတင်းအချက်အလက်တစ်ခုလုံးမရရှိနိုင်ပါ။ ပိုပြီးအသေးစိတ်အသေအချာပြောရရင်ကျနော်တို့ကဒီအကြောင်းပြောနေတာပါ QR Code Scanner ၎င်းကိုအွန်လိုင်းနှင့်လူတိုင်းအတွက်အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဤအခမဲ့ online QR ကိရိယာများသည်လူတို့အားမိမိတို့ချစ်မြတ်နိုးရသူများနှင့်အဆက်အသွယ်ရှိရန်သို့မဟုတ်သူတို့၏ဖောက်သည်များနှင့် ဦး ဆောင်သူများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုကိုရှောင်ရှားပြီးသတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ဝေရန်နည်းလမ်းများရှာဖွေနေပါကသင့်အားကူညီရန် QR ကုဒ်များသည်ဤနေရာတွင်ရှိသည်။
လူမှုရေးအကွာအဝေးက COVID-19 ကိုမည်သို့ကူညီသနည်း။
လူမှုရေးအကွာအဝေးကိုမြှင့်တင်ရန် QR ကုဒ်များကကူညီနိုင်ပါသလား။
+ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်မရှိဘဲသတင်းအချက်အလက်မျှဝေခြင်းကို QR Readers အွန်လိုင်းကဘယ်လိုကူညီသလဲ
+ ပုံနှိပ်ပစ္စည်းများအပေါ် QR ကုဒ်များကိုသုံးပါ
+ QR ကုဒ်များဖန်တီးခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းအတွက်သိကောင်းစရာများ
အရာအားလုံးကိုဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်အောင်လုပ်ကြရအောင် - သင် coronavirus နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းများနှင့်သတင်းအချက်အလက်အမျိုးမျိုးနှင့်အလွန်အမင်းများနေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးပါသည်အဘယ်အရာကို အွန်လိုင်း QR စကင်နာ နှင့်လူမှုရေးဝေးကွာသော?
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ၏အဆိုအရ လူများသည်ဖြစ်နိုင်လျှင်အနည်းဆုံး ၁ မီတာအကွာအဝေးကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်ကိုလျင်မြန်စွာပြန့်နှံ့ခြင်းမှကာကွယ်ရန်တစ်ခုတည်းသောလက်တွေ့ကျနည်းလမ်းများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်၊ လူများသည်ဖြစ်နိုင်သည့်အခါတိုင်းသူတို့၏မျက်နှာနယ်မြေကိုထိခြင်းမှရှောင်ကြဉ်သင့်သည်။ ၎င်းတွင်ပါးစပ်၊ နှာခေါင်းနှင့်မျက်စိတို့ပါ ၀ င်သည်။ သင့်လက်၌ရှိစဉ်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည်သင့်ကိုမကူးစက်နိုင်ပါ၊ သို့သော်သင်၏မျက်နှာသို့ရောက်ရှိပြီးနောက်၎င်းသည်အလွန်လွယ်ကူသွားသည်။ ပြီးတော့ရိုးသားကြပါစို့: ငါတို့လက်များသည်များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်နှာကိုမှန်မှန်ထိမိသလား။
Coronavirus သည်ကုမ္ပဏီအများအပြားအပေါ်အကြီးအကျယ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်နှင့်နေရာများတွင်အကန့်အသတ်ရှိပါကအဝေးမှသတင်းအချက်အလက်မျှဝေခြင်းကိုတီထွင်ဖန်တီးရန်အချိန်ကျပြီ။ ကောင်းသောအရာဖြစ်၏။ QR ကုဒ်များသည်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားကူညီသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နည်းပညာအကူအညီဖြင့်အခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းယူနိုင်သည်။ ဆန်းသစ်သောကုမ္ပဏီများမည်သို့အသုံးပြုနေကြသည်ကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်အသုံးပြုမှုကိစ္စများကိုကြည့်ပါ အခမဲ့ qr ကုဒ်စာဖတ်သူများ.
American Airlines သည် COVID-19 လုံခြုံမှုကိုမြှင့်တင်နေသည်
ဟုတ်ကဲ့ လက်ရှိပိတ်ပစ်မှုကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလုံးသည်သူတို့၏စီးပွားရေးကိုရပ်တန့်ပြီးဒေဝါလီခံကြရသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ အမှန်မှာဝင်ငွေဆက်လက်ရရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ တစ်ခုခုကိုလမ်း, အဓိကအာရုံစိုက်ဖောက်သည်ဆက်သွယ်ရေးအပေါ်အာရုံကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဖြစ်သင့်သည်။ ၎င်းသည်သတင်းအချက်အလက်ဖြန့်ဝေခြင်းအပေါ်များစွာမှီခိုသည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်ရှောင်ရှားရန် QR Readers အွန်လိုင်းမှမည်သို့ကူညီသည်
လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ - ယနေ့အချိန်တွင်လူကြိုက်အများဆုံး chat platform တစ်ခုဖြစ်သော FB Messenger မှတစ်ဆင့်သင့်ဖောက်သည်များနှင့်သင့်ကိုလွယ်ကူစွာဆက်သွယ်ပါ။
ဂူဂဲလ်မြေပုံများ - သင့်တည်နေရာကိုဝေမျှပါ။
ဝိုင်ဖိုင် - သင်၏ WiFi ကိုဝေမျှပါ။ လူတိုင်းသည်အခမဲ့ WiFi ကိုနှစ်သက်ကြသည်။
TikTok - စွဲလမ်းမှုနှင့်ရန်လိုမှုအရှိဆုံးကြီးထွားနေသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုသာလျှင်ရှိသည်။ သင့်အကြောင်းအရာကိုမျှဝေရန်ဒီတစ်ခုကိုသုံးပါ။
Instagram - ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်အကြောင်းအရာများ၏ဘုရင်။
Snapchat - သင်မျိုးဆက်သစ်များနှင့်စကားပြောလိုပါကဤအရာကိုအသုံးပြုပါ။
ကြေးနန်း - Telegram အုပ်စုများသည် messenger ကိုအစားထိုးအသုံးပြုရန်အတွက်ကြီးမားသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
လက်လီ - လက်လီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်သူတို့၏စီးပွားရေးကိုစီမံရန် QR Codes ကိုမည်သို့အသုံးပြုနေသည်ကိုကြည့်ပါ။
အစားအစာနှင့်စားသောက်ဆိုင်များ - အစားအစာလုပ်ငန်းသည်ဤနည်းပညာအသစ်၏အားသာချက်ကိုရယူနေသည်။
အားကစားရုံ & ကြံ့ခိုင်ရေးစတူဒီယို - ထိခိုက်နစ်နာမှုအများဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းများအနက်အားကစားရုံများပင်အသုံးပြုနေသည် အွန်လိုင်း QR စာဖတ်သူများ။ သူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုကိစ္စရပ်များထွက်စစ်ဆေးပါ။
အမြတ်အစွန်းမဟုတ် - ဒီလူတွေကသိပ်နောက်မကျဘူး။
ပုံနှိပ်သည့်ပစ္စည်းများပေါ်တွင် QR ကုဒ်များကိုသုံးပါ
အဝတ်အစား - အထူးသဖြင့်အဝတ်အစားတံဆိပ်များကိုဆိုလိုသည်။ သို့သော်သင်သည်ထိုအဝတ်အစားများကိုတိုက်ရိုက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနိုင်သည်။
စာအုပ်များနှင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းများ - ဒစ်ဂျစ်တယ်နှင့် analog အကြားကွာဟချက်ကိုပေါင်းကူးရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ယာဉ်များ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ - ဟုတ်တယ်၊ သူတို့သည်မြို့တော်ကိုလှည့်ပတ်။ အခမဲ့နေရာထိုင်ခင်းပေးသည်။
Windows - ကြောက်စရာကောင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ပြတင်းပေါက်များပေါ်တွင်ပွင့်လင်းမြင်သာသောနောက်ခံ QR Code ဒီဇိုင်းကိုသုံးပါ။
စာရေးကိရိယာ - သင်၏စီးပွားရေးကဒ်များ၊
အကွာအဝေးကိုထိန်းသိမ်းထားစဉ်သတင်းအချက်အလက်မျှဝေရန် QR ကုဒ်များကကူညီသည်
ယနေ့ခေတ် QR Codes ဖတ်ရှုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ကောင်းသည်မှာ iPhone နှင့် Android မော်ဒယ်အားလုံးနီးပါးသည် QR Codes များကိုမူလစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်နောက်ထပ်အပလီကေးရှင်းများမလိုအပ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ - ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်မလိုအပ်ပါ!
ဇာတိ QR Code စကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်း၏အဓိကအားနည်းချက်တစ်ခုမှာများသောအားဖြင့်သမိုင်းသည်သိမ်းဆည်းခြင်းမခံရခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သင် scan လုပ်ထားတဲ့ code တွေအားလုံးကိုအလွယ်တကူမေ့သွားနိုင်ပါတယ်။ သင်၏ QR Code scan မှတ်တမ်းကိုသိမ်းရန်လိုအပ်ပါကအခမဲ့အကောင့်တစ်ခုအတွက်အခမဲ့စာရင်းသွင်းနိုင်သည် အွန်လိုင်း qr code စကင်နာ ဒီမှာ tool ကို။
အရွယ်အစား: များသောအားဖြင့်သင်မည်မျှသွားနိုင်သည်ကိုကန့်သတ်ချက်မရှိသော်လည်းသင် QR ကုဒ်များသည်အလွန်သေးလွန်းပါကစီးပွားရေးကဒ်များကဲ့သို့သေးငယ်သည့်ပစ္စည်းများသည်ပြproblemsနာများရှိနိုင်သည်။ QR ကုဒ်များသည်အနည်းဆုံး ၂x ၂ စင်တီမီတာ (သေချာသည်မှာimperကရာဇ်၏ ၀.၈ × ၀.၈ လက်မဖြစ်သည်) ။
မာတိကာ QR ကုဒ်များသည် ၄ င်းတို့၏အဓိကအသုံးပြုမှုဖြစ်သော်လည်းဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်များမှသာကန့်သတ်မထားပါ။ သင်သိပါသလား၊ အီးမေးလ်များ၊ ခေါ်ဆိုမှုနံပါတ်များ၊ vCard များကိုမျှဝေခြင်း၊ တည်နေရာများနှင့်အခြားအရာများစသည်တို့လည်းသင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီဇိုင်း: လှပသော QR ကုဒ်များမှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ပါက scan ဖတ်ရန်မခက်ခဲပါ။ တကယ်တော့အရောင်တွေ၊ အမှတ်တံဆိပ်တွေနဲ့ပိုကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းကလူတွေကိုများများကသင့်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုယုံကြည်လာစေပြီး၊
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတော်တော်များများသည်လူမှုရေးဝေးကွာခြင်း၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကျိန်းသေအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော်လည်း၎င်းသည်သိပ်မဆိုးလှပါ။ လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်အခြေအနေများနှင့်အတူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နည်းလမ်းအသစ်များကိုရှာဖွေပြီးဆက်လက်တီထွင်ရန်မှာအလွန်အရေးကြီးသည်။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ စားသောက်ကုန်နှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးလုပ်ငန်းသည်ပိုမိုဆိုးရွားသည့်ဒဏ်ကိုခံစားခဲ့ရသည်။ သို့သော်သူတို့သည်ဤကာလကိုပြန်လည်ခုန် ထွက်၍ အသုံးပြုရန်အချိန်ယူနေကြသည်။ ဒီဆောင်းပါးမှာပါတဲ့ကိုးကားချက်များအရ QR Code စာဖတ်သူတွေကိုသူတို့အကြောင်းအရာတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုအွန်လိုင်းမှာဘယ်လိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပါ။
QR ကုဒ်ကယ်ဆယ်ရေး ခရီးသွားလုပ်ငန်း
QR ကုဒ် ဒေတာအကန့်အသတ်ရှိသည်